CCleaner Business Edition 3.18.1707 Final | အိမ်လွမ်းသူ...
ကျွန်တော် ဒီတစ်ခါ CCleaner Business Edition 3.18.1707 Final လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်...! Cleaner ကောင်လေးတစ်ခုဖြစ်သောကြောင့် တင်ပေးလိုက်တာပါ...! ဒီကောင်လေး Update လေးထွက်လာလို့ တင်ပေးတာပါ...! သူငယ်ချင်းတို့ စက်ထဲမှာ ရှိထားသင့်တဲ့ Software ကောင်းလေးပါ...!ကျွန်တော် အောက်မှာ Media Fire လေးဖြင့်တင်ပေးထားပါတယ်...!
1. Run file CCleaner - Business Edition.exe, and setup it
2. Exit CCleaner
3. Open folder Update 3.18.1707 and tun file ccsetup318.exe
" ဒီမှာယူသွားပါ..." ( 5.93 MB )
1 Response to CCleaner Business Edition 3.18.1707 Final
အစ်မလည်း ဒါလေး သုံးတယ်။ သုံးလို့ တကယ်အဆင်ပြေတယ်။